Home / Interior design / Marbra + Wood Grille, manamboatra ny hatsaran'ny gadona | Zero Square Design
2021 / 05 / 27 FisokajianaInterior design 6053 0
Mijanona ao amin'ity sambo ity ireo naoty momba ny fiainana. Ny fofom-baravarana dia hevitra tsy azo ovaina izay mampifangaro mangina ny toetra sy ny hevitry ny tanàna, ary koa mitondra ny fiainana ara-kolontsaina sy ny gadona kalitaon'ny fiarahamonina. Ny tetikasa dia mifanila amin'ny farihy Songshan, miaraka amin'ny toerana kanto sy tombony miavaka amin'ny toerana tsy manam-paharoa. Miaraka amin'ny natiora, kolontsaina ary zavakanto no fotony, sehatra iainana vaovao iankinan'ny kolontsaina tatsinanana sy ny fitaovana fivarotana hihaona amin'ny filan'ny olona sy ara-tsosialy.
Amin'ny alàlan'ny fiasa sy ny tontolon'ny vondrom-piarahamonina misy fiasa isan-karazany sy mitambatra, dia manome fomba fiainana boribory tsy manam-paharoa amin'ny famoronana fiaraha-monina. Izy io dia mamorona kolontsainan'ny vondrom-piarahamonina feno traikefa manitrika mifototra amin'ny lova maha-olombelona lalina. Ny endrika sy ny dikan'ny harena efatra amin'ny literatiora dia tafiditra ao amin'ny filaharana sy ny kanto an-habakabaka, toy ny tontolon'ny literatiora ao amin'ny zaridaina boky iray manontolo.
Toerana fisainana - Fikarohana
Fanondranana teboka fifandraisana
Rehefa miditra amin'ny lavarangana ianao dia hitsena anao fambolena izay mindrana avy any ivelany. Ny gadona sy ny gadon'ilay habaka dia voafaritra mazava amin'ny alàlan'ny faritra midadasika amin'ny akora tendrombohitra sy ny haingon-trano. Ny tsipika mampihetsi-po amin'ny voalohany ary avy eo midina dia ny teboka mampifandray amin'ny vokatra ara-kolontsaina. Ny fifandraisana misy eo amin'ny tantara sy ny kolontsain'ny tanànan'i Dongguan sy ny natiora dia boka tampoka.
“Fomba fahitana hariva momba ny tanànan'ny renirano”
Ny masoandro dia mamirapiratra amin'ny fasika fisaka amoron'ny ony,
ary ireo sambokely manjono dia mirona hiampita ny morontsiraka amin'ny fiakaran'ny rano.
Ny marbra miendrika sambo dia miteraka habaka mampientanentana, toa ny hoe avy amin'ny habakabaka io. Izy io dia toy ny mandeha ao anaty hosodoko sy sary hosodoko, sarintanin'ny atmosfera ankehitriny sy anatiny sy ivelany. Ny fametrahana ny "Thinking - Exploring" dia eo afovoan'ny habaka, maneho ny fifandraisana misy eo amin'ny tontolo sy ny mahaolona, ​​ary ny lova tononkalo sy sary hosodoko taloha.
Ny fametrahana halo goavambe dia ampidirina ao anaty sambo fiara. Ny lanitra sy ny hazavana dia tafiditra tao amin'ny habakabaka, nahatonga ny hazavana sy ny aloka hiova tampoka. Ny akany malalaka an'ny zenith sy ny jiro boribory dia mamorona an'ity habaka ity toa ny fantsom-pohy mitsangana mampifandray ny tontolo ivelany.
Ny taratry ny fahitana lavitra sy ny fiadanan'ny rano eo akaikin'ny rano. Ny fahazavan'ny mandrakizay dia miparitaka midina, ary ny hazavan'ny eritreritra dia mitondra antsika any amin'ny fisandratana. Io fifandraisana eo amin'ny anatiny sy ivelany io, ny fikajiana ny fahendren'ireo teo alohany sy ny fahatsapana ny fiainana maoderina, no mitaona antsika hiandrandra ny ho avy amin'ny fahasoavana sy fahatokisan-tena ary fitoniana.
Misy endrika miavaka amin'ny endrika sy tononkalo amin'ny tononkalo. Ny habakabaka fasika dia manana ambaratonga hafakely ihany koa. Ny fifandimbiasana mitohy dia miteraka fahatsapana hatsarana, izay ahatsapantsika ny hakanton'ny toe-tsaina mahafinaritra isan-karazany, hatsaran-tarehy misimisy ary ny hatsaran'ny tsy fahampian'ny sy matevina. Noho izany, afaka miditra amin'ny karazana ara-panahy sy ara-tsaina aorinan'ny fiainana isika.
Ao amin'ny faritra boaty fasika, ny fitoeran-tsolika grille hazo dia mamakivaky ny valindrihana manontolo, mamorona fahatsapana gadona ary miaraka amin'ny fiovan'ny hazavana sy ny aloka.
Manoritsoritra ny filaharan'ny sary an-tsary
Amin'ny sehatry ny fifampiraharahana, manome lanja ny habaka ny zavakanto, ary ny foto-kevitry ny fitehirizam-boky dia manatsara ny fisehoan'ny habaka, manome sary an-tsaina ireo mpitsidika sy traikefa momba ny zavakanto. Rehefa tsiroo tsara ilay izy vao azonao ny fatratra sy ny tombantombana amin'ny toerana tsirairay. Amin'ny alàlan'ny collage sy ny fampifangaroana ny seho samihafa sy ny tontolon'ny famolavolana dia azo tsapain-tanana daholo ny fahakingana rehetra.
Ny hazavana dia enjehin'ny hazavana, ary hazavana voajanahary be dia be no miposaka amin'ny volo volotsangana miendrika sambo eny amin'ny zoron-trano rehetra, ahafahan'ny olona mitoetra milamina. Ilay boky natsangan'ny tanana dia mahatonga ny olona hanana fifandraisana voajanahary akaiky amin'ny hazavana sy boky ary ity toerana sy toerana ity. Izy io dia maneho ny hazavan'ny fahalalana mamiratra amin'ny tanindrazan'ny fanahy sy ny fahendrena manazava. Mamela ny fanahy hanan-karena sy hatao lafatra.
Ny hakanton'ny boky dia mitoetra ao am-po fa tsy amin'ny andalana. Manana trano volamena manokana ilay boky, ary manana ny endriny toy ny jade ny boky. Miorina amin'izany, ny fiainana milamina tadiavin'ny literatiora dia ampidirina amin'ny sehatry ny fiainana ankehitriny amin'ny alàlan'ny fanovana ny seho endrika. Ny fitaovana dia malefaka amin'ny feo, ary ny tonony dia tsotra sy kanto. Ny fifandraisana tsy manam-petra eo amin'ny olona sy ny olona, ​​ny olona sy ny natiora, ary ny olona sy ny habaka dia mamorona feo maivana sy kanto amin'ny "fiainana maivana" ho an'io toerana io.
Eo an-tampon'ny firafitry ny hatsarana atsinanana nolovaina, hitantsika ny fomba malefaka sy kanto amin'ny fifandonana amin'ny kolontsaina Atsinanana sy Andrefana. Izy io dia manana fankasitrahana ara-kolontsaina tokana sy herin'ny hatsarana. Izy io dia mirakitra ny famerenana sy fahatsiarovana ny lasa, ny eritreritra ny amin'ny ho avy ary ny fiheverana ny fikarohana ny toeram-ponenana.
Ny habaka dia noforonina tamin'ny fomba maoderina mba hanapaka ny sehatra mety kokoa. Ireo singa kanto atsinanana sy andrefana amin'ny endriny mifangaro dia mihoatra ny fetran'ny sary an-tsaina amin'ny famerenana fanovana samihafa. Izy io dia mahazo fomba maro karazana ary mahatratra ny fanatsarana sy ny hakanton'ilay habaka tokana.
Ny fahazarana ny sakana sy ny jiro amin'ny rindrina dia mifampitaratra, mamaritra ny filaminan'ny sary an-tsary. Ny fifandraisana misy eo amin'ny hazavana sy ny aloka dia mitantara amin'ny endriny, manjavozavo ary mazava, ary ny seho iray manontolo dia fihenjanana ara-javakanto. Ny tena dikan'ilay habaka dia tsy ny haingon-trano mihaja eo amboniny ihany, fa koa ny fitadiavana kolontsaina tsy azo soloina sy tsy manam-paharoa miorim-paka ao.
Tontolo iray izay avy amin'ny estetika metaphorical nentim-paharazana ary mampifangaro ny hatsarana amin'ny vanim-potoana. Mampifangaro ny tanàna amin'ny natiora, amin'ny zavakanto, ary mampiseho ny sehatry ny fiainana. Manantena izahay fa amin'ny alàlan'ny fananganana ny sehatry ny fiarahamonina tsara sy bitika tsirairay avy dia afaka mitondra ilay sary an-tsaina fiainana mahafinaritra ao anaty isika.
Anaran'ny tetikasa: Biraon'ny varotra mandarin ny OCT Dongguan - zaridaina madio madio
Mpamorona: Dongguan Overseas Chinese Town Industrial Co.
Adiresin'ny tetikasa: Dongguan. Liaobu
Daty fanomanana: Mey 2021
Famolavolana anatiny: Zero Space Design
Famoronana atitany: Fanaka fanaka an-habakabaka
Saripika anatiny: fitaratra WYAP
Famolavolana endrika: Dongguan OCT Industrial Co.
—— Momba ny Kianja Zero ——
Shenzhen Zero Square Space Design Co., Ltd, antsoina hoe Zero Square Design, dia orinasa mpamorona anatiny mitady endrika mandroso. Ny orinasa dia nanjary ekipa fototra misy olona maherin'ny 70, ao anatin'izany ny ekipa mpikaroka sy fampandrosoana izay mihoatra ny olona 30, ekipa mpamorona endrika malefaka feno olona mihoatra ny 20, ary olona hafa endrika. Ny mpikambana ao amin'ny ekipa tetikasa lehibe dia nanao fanazaran-tena tao amin'ny andrim-panjakana famolavolana malaza nandritra ny folo taona mahery. Zero Square dia mifantoka amin'ny serivisy fanamboarana avo lenta an'ny famolavolana birao fivarotana, famolavolana trano modely, famolavolana birao ara-barotra, famolavolana klioba tsy miankina ary famolavolana trano lafo vidy.
"Z" dia natao ho an'ny zavatra tsy manam-petra ",. "Z" no mari-pana, kely sy mahavariana, "POWER" no hery, dia ny fivoaran'ny tena ary fitomboana mitohy. Ny lojika, ny mari-pana ary ny fanavaozana no fototry ny famolavolana Zero Square. Ny famolavolana Zero Square dia nahazo loka mari-pahaizana maro tao an-trano sy tany ivelany, ary ny sangan'asany dia niitatra tamin'ny tanàna lehibe rehetra any Sina. Manaraka ny foto-kevitry ny famolavolana ny "fisainana iraisampirenena - estetika est orient", ary mandray ny famoronana ny sandan'ny mpanjifa ho toy ny teboka fanombohana hampita ny maha-olombelona sy ny marika ifotoran'ny tetikasa. Amin'ny alàlan'ny fiteny famolavolana, miverina amin'ny votoatin'ny estetika fiainana isika, ary manome ny habaka fahalalana sy fiheverana marolafy refy lalindalina kokoa.
Previous :: Ny fiverenan'ny estetika momba ny fiainana atsinanana - Yuanhe Daqian Next: Kompleks iray mandeha amin'ny habakabaka mikoriana amin'ny hery mahery vaika | Tikai Interior Design